समायोजनपछि कर्मचारी अभाव हुँदा बर्थिङ सेन्टर बन्द - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ लुम्बिनी प्रदेश ∕ समायोजनपछि कर्मचारी अभाव हुँदा बर्थिङ सेन्टर बन्द
समायोजनपछि कर्मचारी अभाव हुँदा बर्थिङ सेन्टर बन्द
डी. आर. बन्जाडे मंगलबार, २०७६ मंसीर ३ गते, ०९:५६ मा प्रकाशित
बुटवल—कर्मचारी अभावका कारणले बर्थिङ सेन्टर बन्द हुँदा स्थानीय गर्वभती तथा सुत्केरी महिलाहरु मर्कामा परेका छन् । कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका—७ हरनामपुरमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विगत एक महिनादेखि बन्द हुँदा स्थानीय मर्कामा परेका हुन् ।
हाल बन्द अवस्थामा रहेको हरनामपुरस्थित बर्थिङ सेन्टर गाउँपालिकाले कर्मचारीका विषयमा लापरबाही गर्दा बन्द भएको स्थानीयको आरोप छ । यद्यपी गाउँपालिकामा कर्मचारी नभएकोले बन्द भएको गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवले बताउँछन् । विगत लामो सयमदेखि चल्दै आएको बर्थिङ सेन्टर कार्मचारी समायोजनपछि कर्मचारी अभावमा बन्द भएको उनको दावी छ । संयोजन भएर कार्मचारी आए पछि मात्रै बार्थिङ सेन्टर सुचारु हुने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य जनचेतनाको हिसावले पछाडि रहेको आरोप खेपिरहेको कपिलवस्तु जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव देखिएको हो । अस्पतालमा सुत्केरी गराउनुपर्छ भन्ने अभियान संचालन हुनुपर्ने अवस्थामा बर्थिङ सेन्टर नै बन्द हुनु दुखद् पक्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘अस्पतालमा सुत्केरी गराउने बानीको विकास गर्न सरकारले केही गर्ला भनेको त स्वास्थ संस्था बन्द गर्दछन् । खै बुझ्नै सकिदैन्,’ स्थानीय रविशंकर यादवले भने ।
हरनामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दरबन्दीअनुसारको कार्मचारी नभएको स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख सरिता गुप्ताले बताइन् । ११ जनाको दरबन्दी रहेको सेन्टरमा ३ जना मात्रै कर्मचारी भएकाले काम गर्न असहज भएको छ । उनले भनिन्, ‘कर्मचारी नभएपछि सेवा बन्द भएको जानकारी गाउँपालिकामा गराएका छौं । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा प्रशासन शाखामा समेत पत्र रहेको छ । तर, पनि कुनै सुनवाई भएको छैन ।’
उनकाअनुसार अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्थिङ सेन्टर र गाउँघर क्लिनिक, खोप समेत बन्द रहेको छ । ‘गाउँघर क्लिनिक तथा खोप क्लिनिक हामी यहाँ आउनेलाई दिइरहेका छौं । तर गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिन सकेका छैनौं । गाउँपालिकासँगभन्दा सुनवाई नै हँदैन । कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भनिन् ।
यता गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाइदिनको लागि पटक–पटक भन्दा कुनै सुनवाई नभएको वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष जनार्दनप्रसाद कुर्मीले गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यति समस्या मात्रै हैन गाउँपालिकाले समयमा औषधि नपठाउँदा झन समस्या परिरहेको छ ।